मनमुटाव भएपछि ओली र प्रचण्ड अलग्गीदै, आ–आफ्नै बाटो हिँड्ने ! – Khabar Silo
मनमुटाव भएपछि ओली र प्रचण्ड अलग्गीदै, आ–आफ्नै बाटो हिँड्ने !
काठमाडौं– सत्तारूढ दल नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच चिसो बढेको छ । दुई अध्यक्षबीच दुरी बढेपछि अहिले उनीहरु आ–आफ्नै रणनीति बनाउन लागि परेका छन् । पार्टी एकता गरेको १७ महिनामै उनीहरु आ–आफ्नै रणनीति बनाउन लागि परेका हुन् ।
एकता प्रक्रियाबाट अलग हुँदा नकारात्मक सन्देश जाने र तत्काल विभाजनको पनि सम्भावना नदेखेपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रणनीति बदलेका हुन्। ओलीले नेताहरुको कार्यविभाजन गर्दा आफ्नो अनुकूल बनाउने, रिक्त सभामुख चयनमा प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर जाने योजना बनाएका छन् भने प्रचण्डले पार्टीको संगठन, प्रतिपक्षीसँगको सम्बन्ध विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मजबुत बनाउने रणनीति लिएका छन्।
एकता भएको छोटो अवधिमै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कार्यशैली’लाई लिएर सतहमा देखिनेगरी दूरी बढेपछि प्रचण्डले नयाँ रणनीति तय गरेका हुन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले दिएका पाँच सुझाब कार्यान्वयन गराएपछि मात्रै पार्टीमा आफू बलियो हुन सक्ने प्रचण्डको विश्लेषण छ।
प्रधानमन्त्री ओली भने प्रचण्ड असन्तुष्टिपछिको अबस्था विश्लेषण गरेर नयाँ रणनीति बनाउन थालेका छन्। तर, बाहिरबाट हेर्दा प्रचण्ड र ओलीले आइतबार र सोमबार बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेर कुनै दूरी नबढेको सन्देश दिन खोजेका छन्। ओलीलाई भेटन् शनिबार बालुवाटार नगएका प्रचण्ड आइतबार भने ओलीसँग बालुवाटारमा गएर झण्डै दुई घण्टा छलफल गरे।
त्यसपछि सोमबार पनि ओली र प्रचण्डबीच आधा घण्टा छलफल भयो। पछिल्ला छलफल रणनीति अन्तर्गत नै भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
ओलीले फसाएको भन्दै रोए महरा, सिटौलासँग खुलाए यस्ता कारण !
काठमाडौं– प्रहरी हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फसाएको बताएका छन् । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग नर्भिक हस्पिटलमा भएको भेटमा उनले ओलीले आफुलाई फसाएको दावी गरेका हुन् । सिटौलासँग रुँदै उनले सरकार र सरकारको नेतृत्वप्रति फरक मत वा असहमत राख्ने विपक्षी दल होस् वा सत्तारुढ दलका नेतालाई एकपछि अर्को गर्दै […]
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले प्रतिनिधिसभा बैठक छाडेर बाहिरिएकी छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले नेपालको नयाँ नक्सा निशान छापमा समेट्न गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि गिरीले दर्ता गराएको संशोधन अस्वीकृत भएको घोषणा गरेलगत्तै उनी बैठकबाट बाहिरिएकी हुन्। गिरीले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएकी थिइन्। सभामुख सापकोटाले बैठकमा गिरीलाई बोल्न दिन खोजेका थिए। तर सांसदहरूले होहल्ला गरेका […]
पद्मावत फिल्ममा सलमान, ऐश्वर्या र अजय देवगनले अझ राम्रो भूमिका निभाउँथेः शाहिद कपुर